China azu paaki T-B3142USB rụpụta na Factory | TIGERNU
E nwere otutu nchekwa compartments gụnyere otu mbadamba biini na otu iche iche laptọọpụ ogige na kaadị ihe njide + iko nkwusioru imewe. Zuru oke maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kwa ụbọchị na azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ, kọleji na njem.
Ihe: a azu paaki eji splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ polyester, inogide, mgbochi tearing, eco-enyi na enyi. Mkpọchi mkpọpu eze 4 ezé mkpọchi nke isi ogige na-enye abụọ mgbochi ohi nchedo na mkpọchi mkpọchi na-enye ibu njem nchekwa gị.
Nkasi obi nkasi obi: Ergonomic mere ejikere ubu na azụ, emere site na mgbatị na ume iku ume na akwa. Onwem nwere na kemeghi obi ikechi na mgbanwe mgbanaka hasp, -enyere gị aka ịchịkwa eriri ogologo kpamkpam na-ebelata ibu arọ. Akpa anyị na-enye nkwado na nkasi obi na azụ na ubu gị.Ewube USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na eriri USB nwere ike ịnye gị ụgwọ ekwentị gị n'oge ọ bụla.
Ebughibu Design Ikike buru ibu: Ebughibu uzo di iche-iche eji eme ihe n'uzo zuru oke. Na-enyere gị aka tufuo-egwu ala gburugburu na akpa. A ga-ahazi ngwa ọ bụla. Otu laptọọpụ dị iche iche zoro ezo na-ejide laptọọpụ 15.6 nke anụ ọhịa ahụ.
Nọmba nlereanya T-B3142USB
Nha: L33 * W20 * H49cm
Ụdị: Stdị Japan, Ejiji
Nke gara aga: Paaki T-B3105A
Osote: Paaki T-B3143USB